Rafa Rodríguez Ballesteros | | လုံခွုံရေး, လဲ tutorial
သေချာတာပေါ့ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်စမတ်ဖုန်း၏အစီအစဉ်တွင်« AA »မှစတင်သောအဆက်အသွယ်ရှိသည်။ ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်အပေါ်အရေးကြီးသောလူတို့နှင့်ဆက်စပ်။ ဤသူသည်ကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်ထားသည့်အဆက်အသွယ်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏အစီအစဉ်၏ထိပ်တွင်ပေါ်လာစေရန်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးနီးပါးပြုလုပ်ခဲ့သည့်အရာဖြစ်သည်။ ထို မတော်တဆမှု (သို့) အရေးပေါ်အခြေအနေအတွက်သူတို့အသုံးပြုတဲ့ဖုန်းကိုသုံးပြီးဒီလူကိုအလွယ်တကူဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်.
1 ဆက်သွယ်ရန် "AAA" + နာမည်မရှိတော့ပါ။
ဆက်သွယ်ရန် "AAA" + နာမည်မရှိတော့ပါ။
သို့သော်လွန်ခဲ့သောအချိန်ကကျွန်ုပ်တို့အား ၀ န်ဆောင်မှုပေးခဲ့သောဤကြိုတင်ကာကွယ်မှုသည်ယခုခေတ်ကုန်သွားပြီဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောအမည်များကို“ AAA” ထဲသို့ထည့်ခြင်းသည်နာမည်မရှိတော့ပါ။ ဤသည်ဖြစ်သော်လည်း ကြက်ခြေနီအသင်းရဲ့စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးမှာငါတို့အားလုံးနီးပါးကအကြံပေးခဲ့တဲ့အရာတစ်ခု။ အများကြီးမရှိတော့ဘူး။
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသောဆိပ်ကမ်းများတွင် ဖုန်းကိုသော့ဖွင့်လို့မရဘူးဆိုရင်ပထမဆုံးအဆက်အသွယ်လုပ်ဖို့အများကြီးမလွယ်ပါဘူး။ လမ်းပေါ်ရှိလူတစ် ဦး ၏အားနည်းချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ရသည့်ခဏတာကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ သင့်တော်သောအရေးပေါ်ဝန်ဆောင်မှုများကိုနိုင်ငံသားကောင်းအဖြစ်အကြံပေးခြင်းအပြင်သင့်မိသားစုကိုဆက်သွယ်ခြင်းသည်လည်းကျွန်ုပ်တို့အတွက်ကျရောက်ပါသည်။ ထိုသို့ပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်သားကောင်၏ဖုန်းကိုမြေပြင်ပေါ်မှကောက်ယူသော်လည်းဆက်သွယ်မှုကိုရှာဖွေလိုပါက: « unlock pattern »။
အဲဒါကိုကျွန်တော်တို့အနည်းငယ်လုပ်နိုင်တယ်။ ဖုန်း၏အဆက်အသွယ်များကိုကုဒ်နံပါတ်သို့မဟုတ်ပုံစံသော့ခတ်ဖြင့်ဝင်ရောက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အလွန်ခက်ခဲလိမ့်မည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိပါကပုံစံကိုမိတ်ဆက်ပေးရန်အချက်များအောက်တွင်သို့မဟုတ်“ အရေးပေါ်” ဆိုသောကုဒ်နံပါတ်များကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ သော့ခတ်ထားသည့်တိုင်ဖုန်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအရေးပေါ်ဖုန်းခေါ်ဆိုရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ သို့သော်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအရေးပေါ်ဝန်ဆောင်မှုနံပါတ်များကိုသာခေါ်ဆိုခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ မိသားစုဝင်တစ် ဦး ကိုကျွန်ုပ်တို့အကြောင်းကြားလိုလျှင်ကော။
ယနေ့ Androidsis တွင်ကျွန်ုပ်တို့အရေးပေါ်နံပါတ်များအနေဖြင့်လိုချင်သည့်ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာများကိုမည်သို့ပြင်ဆင်ရမည်ကိုသင့်အားသင်ပေးပါမည်။ ဤနည်းအားဖြင့်တစ်စုံတစ်ယောက်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းမှအရေးပေါ်ဖုန်းခေါ်ဆိုလိုပါက terminal ၏တယ်လီဖုန်းစာအုပ်ကိုကြည့်ရှုစရာမလိုဘဲကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သို့မဟုတ်မိဘများကိုခေါ်နိုင်သည်။ ဘာလဲ?။ ဆက်ဖတ်ပါ
ကံမကောင်းစွာဖြင့် iOS, Android တို့နှင့်မတူသည် နောက်ဆုံးပေါ် Android ဗားရှင်းမရောက်ရှိမှီတိုင်အောင်၎င်းတွင်ဖြစ်နိုင်ခြေမရှိပါ။ သို့သော်သင်၏စမတ်ဖုန်းသည်ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသော update ကိုမရရှိသေးပါကကျွန်ုပ်တို့ကိုလည်းသင်အဖြေတစ်ခုပေးမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖုန်း၏ချိန်ညှိချက်များရွေးစရာကိုအသုံးပြုခြင်း။ Settings ထဲမှ Lock Screen ကိုရှာသည်။ ပြီးတာနဲ့အတွင်းပိုင်းကျနော်တို့၏အပိုင်းရိုက်ထည့်ရပေမည် လုံခွုံရေး။ နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့လက်လှမ်းမှီပါတယ် ပိုင်ရှင်အချက်အလက်.
ပြီးတာနဲ့ဒီမှာငါတို့လုပ်နိုင်တယ် ပိုင်ရှင်သတင်းအချက်အလက်မြင်နိုင်ပါစေ။ နှင့်ဤအချက်အလက်ရိုက်ထည့်ရန်လယ်ပြင်၌ရှိကြ၏ လိုချင်သောဖုန်းနံပါတ်ကိုထည့်နိုင်သည်. ဤနည်းအားဖြင့်ရွေးချယ်ထားသည့်ဖုန်းနံပါတ်သည်ဖုန်း၏သော့ခတ်ထားသည့်မျက်နှာပြင်တွင်အမြဲမြင်လိမ့်မည်။။ ဒါကြောင့်တစ်ယောက်ယောက်ကငါတို့ဖုန်းကိုတွေ့ပြီဆိုရင်မင်းကပိုင်ရှင်ကိုရှာမယ်ဆိုရင်မင်းကိုဆက်သွယ်ဖို့လည်းကူညီလိမ့်မယ်။
မကြာသေးမီအချိန်များအတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဇွဲထက်သန်စွာကာကွယ်ပေးသည်။ ထိုအဘို့ငါတို့၌သော့ခလောက်အမျိုးအစားများရှိသည်။ မဖြစ်နိုင်သောပုံစံများ၊ အက္ခရာနံပါတ်များနှင့်ယခုလက်ဗွေများလည်းရှိသည်။ နောက်ဘာတွေပြောမယ်၊ Iris စာဖတ်တာ၊ ဤအချက်များအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အချက်အလက်များကိုလုံခြုံအောင်ထိန်းသိမ်းရန်အဆင်ပြေပါသည်။ သို့သော်ရံဖန်ရံခါအခါအားလျော်စွာကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းကိုအသုံးပြုရန်တစ်စုံတစ် ဦး လိုအပ်လိမ့်မည်ဟုစဉ်းစားသင့်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ကိုဂရုစိုက်ရန်ကူညီသည့်အားကစား application များစွာရှိသည်။ ပြီးတော့ငါတို့အားလုံးနီးပါးမှာဒေတာသိမ်းဆည်းဖို့ငါတို့သုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေမှာကျန်းမာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အက်ပလီကေးရှင်းကိုတပ်ဆင်ထားသည်။ သို့မဟုတ်ပင်ရောဂါလက္ခဏာများကိုအသိအမှတ်ပြုရန်သို့မဟုတ်ကုသမှုလျှောက်ထားရန်။ ဒါပေမယ့် ဤအကြံပြုချက်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းများသည်အရေးပေါ်အခြေအနေတွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီနိုင်သည်.
သင်၏စမတ်ဖုန်းတွင် Android 7.0 ဗားရှင်းကိုတပ်ဆင်ထားပြီးပါကအရေးပေါ်နံပါတ်များကိုတိုက်ရိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ဖုန်းကိုမည်သူမဆိုကျွန်ုပ်တို့ယခင် configured လုပ်ထားသောနံပါတ်သို့ခေါ်ဆိုနိုင်သည်။ သို့သော်မရရှိလျှင်၎င်းသည်မတော်တဆမှု (သို့) ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်လျှင်၎င်းတို့အဆက်အသွယ်ကိုမြင်နိုင်အောင်များစွာကူညီနိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » လဲ tutorial » လုံခွုံရေး » သင်၏စမတ်ဖုန်းပေါ်တွင်အရေးပေါ်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများပြုလုပ်နည်း